Ọzụzụ Ọhụrụ - Production ọrụ metal - CNC - Gaa! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ (NTỤTA-Oge // BSO // CAMPUS BACKGROUND)
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > STEM> Engineering & Technology > NEW - Production ọrụ ígwè - CNC
Onye na-emepụta ihe na-emepụta ígwè na-esote usoro mmepụta na n'okporo ámá igwe ma ọ bụ nrụnye iji hazie ma ọ bụ mechaa igwe. Ọ na-ahụ maka arụmọrụ dị mma nke mmepụta ma na-etinye aka na ya ma ọ bụrụ na ọ bụ obere ihe ọhụụ ma ọ bụ ọrụ malụ ọrụ. Ọ na-eme nlezianya nlezianya na oge ọ bụla. Ọ na-esite n'okporo ámá igwe ma ọ bụ ntinye n'ime na gburugburu ma na-arụ ọrụ ngbochi. Ọ na-akọ akụkọ mmepụta ihe.
Ị mụtara ịrụ ọrụ na ụrọ metal, igwe igwe nri na CNC. Ị na-agbaso omume ụbọchị 1 n'ụlọ akwụkwọ, akwụkwọ nchịkọta akwụkwọ dum nke 1 n'ụlọ akwụkwọ na ụbọchị 3 nyere ọzụzụ dị mkpa n'ebe ọrụ.
Ngwá ọrụ mmepụta ihe nke ọkpụkpụ na-emepụta ụdị ọzụzụ nke abụọ anyị na-agụnye 4 modules:
Nchịkọta igwe ma ọ bụ (ele mmadụ anya n'ihu)
Ụzọ igwe ma ọ bụ nwụnye ọrụ
Mbido ọrụ metal
A na-enye akwụkwọ ikikere maka usoro nke ọ bụla a rụzuru nke ọma.
A na-enye akwụkwọ ikike maka usoro ọ bụla a rụzuru nke ọma.
Ị na-arụkarị ọrụ
Ị nwere mmasị n'ịrụ ọrụ igwe? Ị ga-eme ihe bara uru karia ihe omuma? Ị na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi na nke onwe ya ma ị nwere anya maka nkọwa?
Ị nwere ike ịmalite ịmalite ọzụzụ mgbe niile, ọ bụ ezie na ịmara ihe ndị dị na kọntaktị na-arụ ọrụ. Ọzụzụ ahụ dị irè kama ịkọwa okwu, mana echefula ụdị ọrụ a na-ahụ maka nkà na ụzụ nke ọzụzụ a!
Ị nwere ike ịmalite n'ụdị ahụ ma ọ bụrụ na ị bụ afọ 16 ma wuchaa ma ọ dịkarịa ala afọ 2 na agụmakwụkwọ abụọ.
"Anyị na-arụ ọrụ na-adabere na mmalite ruo n'isi; aka anyị na nkà na ụzụ na-achịkwa kọmputa. Na ị na-etinye ihe ọnụ wee hụ na ọ na-arụ ọrụ, na-enye m afọ ojuju dị ukwuu. "
Mgbe onye ọrụ mmepụta ọzụzụ - CNC ị nweta akwụkwọ nke ọkachamara ọkachamara. I nwekwara ike inwe otu diplọma nke mmụta sekọndrị mezuo. Ọzụzụ a na-enye gị ntọala siri ike ịmalite na ụlọ ọrụ. Ị nwere ike ịrụ ọrụ dịka onye na-atụgharị, onye na-egwu nri, onye ọrụ CNC, mana enwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ.
Otú ọ dị, site na diploma a, ị nwere ọtụtụ ohere iji rụọ ọrụ na ụkọ ọrụ dịka onye na-atụgharị, nchịkọta, onye ọrụ CNC, onye ọrụ, mmezi ọkụ eletriki ma ọ bụ ụlọ ọrụ mmezi.
Mụta + ọrụ zuru ezu